Budata Malwarebytes Anti-Exploit maka Windows
Budata Malwarebytes Anti-Exploit
Free Budata maka Windows (1.76 MB)
Budata Malwarebytes Anti-Exploit,
Anti-Exploit bụ ngwa Malwarebytes mepụtara, onye mepụtara mmemme nchekwa na-aga nke ọma, ga-ahụ na kọmputa gị nwere nchekwa ịntanetị. Nke mbụ, ka anyị kwuo na ebe ọ bụ na nke a abụghị ngwa nje, ị kwesịrị iji ya nakụkụ ngwa nje ọkọlọtọ megide nje ochie na ama ama dịka Trojan.
Anti-erigbu dị irè megide mwakpo a maara dị ka mwakpo ụbọchị efu. Enwere m ike ịkọwa mwakpo ụbọchị efu dị ka mwakpo nke nje ndị amabeghị na nke ewepụtara ọhụrụ nke na-enweghị sistemụ nchọpụta amara.
Ebe Anti-Exploit bụ ngwa nwere ike ichebe kọmpụta gị megide mwakpo ndị a. Site na ụdị efu ya, ọ nwere ikike ichebe Chrome, Firefox, Internet Explorer na Opera nchọgharị, yana Java na mgbakwunye ya. Ọ bụrụ na ị kwalite nụdị nke adịchaghị, ị nwekwara ike nweta nchedo maka mmemme dịka mmemme Microsoft Office na ndị na -agụ PDF.
Ọ bụ ezie na o nwere obere faịlụ, enwere m ike ịsị na ọ nwere interface enyi na enyi. Ọ bụrụ na ị na -eche maka nchekwa gị, echere m na ọ bụ mmemme nke ekwesịrị ibudata ma nwalee ya.
Malwarebytes Anti-Exploit Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.76 MB